Aukey Oo Soo Bandhigay 5 Chargers Oo Casriya Oo Casriya Oo Loogu Talagalay iPhone iyo MacBook | Wararka IPhone
Aukey wuxuu soo bandhigayaa 5 fiilooyin casri ah oo casri ah oo loogu talagalay iPhone iyo MacBook
Ignacio Sala | | Qalabka IPhone
Laba sano ka hor, Apple ayaa qaatay si dhakhso ah ugu soo dallacaya iPhone, sida ku-dallaca wireless, markii inta badan soo saarayaasha Android horay u siiyeen waqti dheer. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo la bixinayo nidaam lacag-bixin deg deg ah, haddana ma ahayn illaa markii la bilaabay iPhone 11 Pro in xeedho la beddelay si looga faa'iideysto.
Labada iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max labaduba waxay la socdaan a 18W xeedho dhakhso leh, go'aan ay ahayd inaan horay u qaato, laakiin dhammaanteen waan ognahay sida Apple yahay. Haddii aadan qorsheyneynin inaad dib u cusbooneysiiso iPhone-kaaga barnaamijka Pro, waxaad raadineysaa xeedho cusub oo leh dhowr dekedo ama waxaad lumisay midkii aad haysatay, xulashooyinka ay Aukey na siiso waa kuwa ugu fiican suuqa.
Iibsashada xeedho ma aha hawl fudud waana inaan waqti yar u hurnaa, hadaanan rabin inaan xanaaqno. Aniguna waxaan leeyahay nacayb, maxaa yeelay haddii aan dooranno xeedho Shiineys ah, waxay u badan tahay in muddo ka dib, xeedho iyo aaladdayaduba ay joojiyaan shaqada.
Sidoo kale, haddii aad rabto ka faa'iideyso amarka degdegga ah ee iPhone-ka, xulashooyinka ka imanaya bariga ayaa waliba ka khatar badan. Aukey wuxuu noo keenayaa xeedho kala duwan oo cusub oo leh hawsha 'Dynamic Detect function', oo ah hawl mas'uul ka ah in la siiyo dhamaan awooda xeedho ee dekedaha la adeegsanayo.
Waxqabadka Deteic Detect waxay hagaajineysaa awood qaybinta dekedda lacag bixinta, sidaa darteed xeedhoku wuxuu bixiyaa wadar awood ah 30W dhammaan dekedaha uu haysto inta aan hal qalab oo keliya ku xirnay. Haddii aan isku xirno labo, awoodda lacag-bixinta waxaa loo qaybin doonaa sida ku xusan tan xeedho.
Tusaale ahaan waxaan si fudud ugu fahmi doonnaa iyaga. Haddii aan haysanno xeedho leh laba dekedood oo wax lagu buuxiyo, USB-C 18W iyo USB-A 12W, xeedhoku wuxuu leeyahay awood dhan 30W, laakiin dhab ahaantii waxay bixin kartaa oo keliya awoodda ugu badan ee 18W, xitaa haddii dekedda oo keliya la isticmaalayo. awood sare. Aaladda Dynamic Detect taasi ma dhaceyso tan iyo markii xeedhoku awood u leeyahay inuu 30W u qoondeeyo dhammaan dekedaha marka kaliya hal deked la isticmaalayo.
Muuqaalkan cusub ee xeedho soo saaraha Aukey waxaa laga helaa labada soo-saare oo ah 30W iyo 60W. Hoos waxaan ku tuseynaa dalabka oo dhan Xeedho Aukey leh Dynamic Detect oo hadda laga heli karo suuqa.
1 Aukey Smart Chargers oo leh Dynamic Detect
1.1 Aukey PA-D1 30W
1.2 Aukey PA-D2 36W
1.3 Aukey PA-D3 60W
1.4 Aukey PA-D4 60W
1.5 Aukey PA-D5 60W
Aukey Smart Chargers oo leh Dynamic Detect
30w xeedho leh Dynamic Detect function, oo leh laba dekedood oo wax soo saar ah: USB-C iyo USB-A. Awoodda 30W waxaan ku soo oogi karnaa qalab kasta oo la jaan qaadi kara si dhakhso leh waqti yar, ha noqoto iPhone ama casriga kale ee la jaan qaada. Waxay sidoo kale la jaanqaadi kartaa Nintendo Switch iyo MacBooks, inkasta oo aysan ahayn ikhtiyaarka ugu fiican. Xeedho 3oW Aukey ah oo leh Dynamic Detect wuxuu leeyahay a qiimaha 30,99 euro.
Haddii gurigeenna aan mar hore aqbalnay iskuxirka USB-C ee aaladaha oo dhan, nooca Aukey PA-D2 ayaa noqon kara xulashada ugu fiican ee la tixgelin karo. Xeedho Tani waxay na siisaa a Awoodda 36W iyada oo loo marayo laba dekedood oo USB-C ah.
Qaabkan ayaa ah la jaanqaadi kara qalab kasta oo taageera xawaareynta degdegga ah, marka lagu daro Nintendo Switch iyo MacBook Air, inkasta oo sidii kiiskii hore, waqtiga rarku sii dheeraan doono. The Aukey PA-D2 waxaa lagu qiimeeyaa 32,99 euro.
Aukey wuxuu naga saarayaa xeedho PA-D3, xeedho na siisa a 60W awood iyada oo loo marayo laba dekedood: USB-C iyo USB-A. Haddii aan wada isticmaalno labada dekedood, culeyska waxaa loo qeybin doonaa sida soo socota: 45W oo loogu talagalay USB-C iyo 15W oo loogu talagalay USB-A. Haddii aan kaliya isticmaalno dekedda kuleylka ee USB-C, awoodda ay na siin doonto waxay noqon doontaa 60W.
Thanks to 60W ee awoodda, waxaan u isticmaali karnaa inaan ku soo dallacno MacBook-keena dhib la'aan, wax aan ku dhicin moodelladii hore. Xeedho 60W oo ah Aukey ayaa lagu qiimeeyaa 49,99 euro on Amazon.
El Aukey PA-D4 wuxuu na siinayaa hal isku xirnaanta USB-C iyo awood dhan 60WAwoodda ugu habboon maahan oo keliya inaad ku dalacdo MacBook-gaaga, laakiin sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka qaaddo MacBook Pro qaab u heellan, iyadoo ah beddel aad u fiican oo ku saabsan xeedho rasmi ah oo loogu talagalay MacBook ee Apple na siiso.
Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa inaan ku dalacno taleefankayaga iPhone-ka ah, taleefanka casriga ah ee isla jaan qaada, Nintendo Switch ... 4W Aukey PA-D60 ayaa lagu qiimeeyaa 34,99 euros on Amazon.
Aukey PA-D5, waa nuuca isku daraya kan ugu fiican dhamaan qaababki hore maadama ay na siiso a 60W awood iyada oo loo marayo laba dekedood oo USB-C ah. Haddii aan isticmaalno hal deked oo keliya, awoodda uu bixiyo xeedho ayaa ugu badnaan ah, taas oo ah 60W. Laakiin si wada jir ah ayaan u wada isticmaalnaa, awoodda kuleylka ayaa loo qaybiyaa 45 / 15W.
Xeedho ayaa ku habboon lacag ka qaad MacBook / MacBook Pro joogto ah iyo haddii aan sidoo kale u baahanahay inaan ka qaadno iPhone-keena, iPad-ka ama wixii kale ee casriga ah ee la jaan qaada oo si dhakhso leh u qaata. Aukey PA-D5 wuxuu leeyahay culeys dhan 181 garaam iyo cabirrada 11 × 7,5 × 3,5 mm. Waxaa lagu qiimeeyaa 59,99 euro on Amazon,
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Aukey wuxuu soo bandhigayaa 5 fiilooyin casri ah oo casri ah oo loogu talagalay iPhone iyo MacBook
Mario Kart Tour ayaa hadda laga heli karaa App Store
Podcast 11 × 05: Yaa ugu cusub wax cusub?